Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 39
2007-05-15 @ 16:55 in Ankapobeny
Mba hiova filamatra kely amin’ity andro ity. Andro iraisam-pirenena momba ny fianakaviana manko ity andro ity. Ny fianakaviana tiana ho lazaina amin’ny fijery tandrefana dia ankohonana no izy kokoa amin’ny teny malagasy. Ny filazan’ny fanjakana moa dia fianakaviana fa izaho kosa hanoratra azy hoe ankohonana. Ny ray, ny reny ary ny zanaka no mandrafitra ny ankohonana. Io no rafitra kely indrindra eo amin’ny fiaraha-monina nefa io ihany koa no fotony na fehizorony.
Nahatsapa ny firenena mikambana fa raha io ankohonana io no tsizarizary na ratsy fototra dia ny fiaraha-monina avy hatrany no potika. Ny fifandraisana eo amin’ny mpiara-belona avy hatrany no simba. Mety hanam-pandrosoana ny firenena fa tsy hisy antoka na oviana na oviana fa hilamina io firenena io. Izany no nahatonga azy nametraka andro iray ho amin’io ankohonana io. Ny ray dia lahy, ny reny dia vavy ary ny zanaka misy lahy sy vavy. Ny fitaizan’ny lahy iray sy ny vavy iray ny zaza iray no hany antoka mahavanona ny fitaizana ny zanaka. Ankehitriny manko dia efa betsaka ny olona no ny iray ihany no mitaiza ny zaza ( ny lahy matetika no mandositra adidy). Na inona na inona fitiavana, na inona na inona fiezahana dia hisy fahabangana hatrany ny fitaizana io zanaka io. Ny lahy sy ny vavy manko dia natao hifameno fa tsy misy feno avy hatrany avy amin’ny lahy na avy amin’ny vavy. Dia tahaka izany no tsy dia mahaampy ny fitaizan’olona mihevitra ny hanangana fanambadiana eo amin’ny samy lahy na samy vavy ka maniry ny hitaiza zaza.
Raha ny ankohonana ary no fototra mampijoro ny fiaraha-monina rehetra dia tsara indrindra raha ara-dalàna io ankohonana io izany hoe manaja ny lalàna hiarovana ny tsirairay ao anatiny. Fenitra ny tsy handravana fahatany io ankohonana io ho toy ny kilalaon’ankizy ka azo ravana na manorina hafa indray. Ny fitaizana mitohy sy maharitra ihany no antoka tsara indrindra mahavanona ny fitaizana ny zanaka. Izany hoe ny ankohonana ihany no fototra mampijoro tsara ny firenena ho vanona sy hanana ny ho aviny. Eto Madagasikara dia betsaka ireo any ambanivolo any no tsy miditra amin’ny sehatry ny fisoratana eny amin’ny lapan’ny tanàna. Samy manana ny antony tsy andehanany eny fa heverin-dry zareo fa ny fomban-drazana dia efa ampy, sady ny fiaraha-monina rahateo dia efa vavolombelona avokoa. Amin’ny ankapobeny anefa dia lasa tsy manana kopia, antotan-taratasy ahafahana mianatra ny zaza teraka tao anatin’ny fomban-drazana tsy misy soratra. Mbola asa goavana no miandry ny mpiadidy amin’ity sehatra hahatonga ny olona nisora-panambadiana ity. Ny fiangonana kristiana rahateo tsy afa-manamasina na mitso-drano ny fanambadiana mbola tsy vita soratra raha tsy te-ho tratran’ny famaizan’ny lalàna.
Ny any ivelany indray indrindra fa ny any amin’ny tany mandroso dia efa tsy raharahiana ihany koa ny hasin’izany fanambadiana izany. Lamaody antitra sy fanerena nataon’ny fiangonana ihany izany araka ny fiheviny. Toy ny zavatra tsy misy dikany fa fiainana mandeha ho azy ny fanambadiana ary mifandraika amin’izany dia azo ovaovana ny vady. Izay tiany tokoa io ka tsy misy azo ferana amin’izany. Saingy mamotika tanteraka ny fisainan’ny ankizy nateraka izany ary mieritreritra aza ny maro amin’izy ireny fa noho ny nataony no nahatonga ny ray sy ny reny hisaraka. Rehefa lehibe koa ireny zaza ireny dia hanana fiheverana sahala amin’ny rainy sy ny reniny ihany koa.
Noho ireo tranga roa nambara ireo fotsiny dia kely dia kely ny tahan’izany olona anaty ankohonana feno izany. Lasa karazana idealy io ankohonana io fa tsy voatery tratrarina na fiatombohan’ny fiainana vaovao eo amin’ny olona iray. Misy mpitoriteny malagasy iray tsy mitsahatra ny mamerimberina fa ao an-tokantrano no tena mahakristiana ny kristiana iray fa tsy any ampiangonana. Any ampiangonana misy miseho ho masina nefa rehefa ao an-trano tena manahirana ny milaza ny toetrany amin’ny fampijaliana vady na zanaka sy amin’ny fitiavan-tena diso tafahoatra fotsiny. Moa tsy izany rahateo no antony nampisy ny fisafidianana izay olona hitondra ny fiangonana amin’ny alalan’ny fitarafana ny fiainan-tokatranon’ireo olona mitolo-tena ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra ?Jerena avy amin'izany ny hoe manana vady firy izy ary manao ahoana ny fitondrany ny zanany.
Maresaky ny 050507(tohiny)
2007-05-05 @ 16:39 in Ankapobeny
Rehefa te-hampita zavatra maro dia matetika no misy hatrany ny adino indrindra fa tsy mba mandray naoty fa izay mitamberina an-tsaina fotsiny no soratana. Dia manatratra izay tsy voasoratra aho eto.
Antananarivo : dia nalaza indray ilay lazaina ho fandrobana teny amin’ny fakana hetra mivantana etsy Mandrosoa (mbola anaty faritra Ambohijatovo ampitan’ny fiangonana Advantista).
Izany hoe araka ny fiheverana dia efa fantatr’ireo hanafika ny fotoana hivoahan’ny mpanatitra vola ho any amin’ny banky foibe araka ny fantatra.
Sarotra be ny hino fa tena fanafihana avy aty ivelan’ireo mpiasa ao anatiny ihany io « fanafihana » io. Ny mpikirakira volabe rehetra (ny tsy miankina angaha no tena fantatro) dia mahalala avy hatrany fa tsy azo atao kinanga mihitsy io resa-bola io indrindra rehefa afindra toerana. Tsy hadalana tsy akory raha misy ny orinasa manokana mpitondra vola afindra toerana miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mifandraika amin’izany. Alohan’ny ivoahan’ny tena mpitondra vola dia tsy maintsy misy mpiambina mivoaka mijery ny manodidina aloha ary izy no manome toromarika hoe mahazo mivoaka amin’izay ny mpitondra vola.
Ny mpandinika avy amin’ny mpitandro ny filaminana zatra ny toe-javatra ihany koa dia mahamarika fa mora loatra ny nahazoana ny vola raha eto Antananarivo io fitrangan-javatra io no resahina. Ny lazaina ho vola very ihany koa dia samihafa be ihany ka tsy ahitana izay tena sandany marina (hamarino amin’ny gazety rehetra). Noho izany dia be ny miombo-kevitra fa fihetsiketsehana anaty sarimihetsika namboamboarina fotsiny io lazaina fa fanafihana tamin’ny Zoma io fa ao anatin’ny (mody atao hoe) departemanta notafihana ihany no misy ny ati-dohan’ny fangalarana.
Antananarivo ihany : Efa milaza azy ho fetsy mihitsy ny sasany amin’ny fanafenana tapakila, na lalao iraisam-pirenena io na fampisehoana atao eto Antananarivo.
Mazava loatra fa tsy maintsy ny ao anatiny ihany no tena mpanao azy fa ny hafa ivelany dia izay sombitsombiny ihany no azony.
Heveriko fa malaza amin’ny resaka kolontsaina tamin’ny faran’ny herinandro indray ny fampisehoana nataon’ny tarika Mahaleo tao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Zoma alina teo. Nanomboka tamin’ny 7 hariva ny fampisehoana ary tsy nijanona izany raha tsy efa nipaika ny tamin’ny 3 ora maraina. Hira 75 no natao nandritra izany 8 ora ngarangidina izany. Tena leo mihitsy izahay, hoy ny mpanatrika iray izay. Tsy dia tomombana loatra ny fanamafisam-peo nandritra ny andiany voalohany ka samy tsy tafiditra anaty revy loatra ny na ny mpihira na ny mpanatrika. Niezaka nanao izay azony natao ihany anefa na dia izany aza. Izany rehetra izany no miseho amin’ny aty ivelany.
Fa mety ho tsy dia misy mpilaza loatra ny nitranga tao anatiny izany hoe ny lafy ratsiny izany ka nahatery ahy hanoratra indrindra indrindra. Nandritra ny andro maromaro dia nifampitadiavana hatrany ny tapakila. Vitsy ihany no tena nahazo tamin’ny vidiny 6.000 Ar fa ny ankamaroan’ny mpividy dia nionona tamin’ny 16.000 Ar na 20.000 Ar izay risoriso mazava loatra. Ny ao amin’ny mpikarakara ihany no tena manararaotra ka minia manafina ny sasany amin’ny tapakila tokony amidy. Teny ampivarotana azy manko raha mbola milahatra ny olona dia lazain’ny mpamoaka tapakila fa lany tsy misy intsony eo aminy. Ny lehibe anefa vao niteny ny marainan’iny fa mbola betsaka tsara ny azovidiana ka tsy misy loatra ny ahiana. Teo no noraisina ny mpankafy maro. Efa tsara asiana anarana mihitsy angamba ny tapakila hisian’ny fanaraha-maso henjana amin’izay ho sarotra kokoa ny hanaovana risoriso ity tapakila ity.
Adihevitra ankapobeny indray : Nandritra ny antso ifanaovana anaty adihevitra dia maro ani’isa tokoa ireo tsy manaiky na oviana na oviana ny hiprivatizena ny jirama satria izay indrindra no andrasan’ny sasany ( iza koa ary izany sasany izany ?). Aleon’ny maro kokoa ampihimamban’ny fanjakana toy izay ampihimamban’ny tsy miankina ity orinasa iray ity. Adidin’ny fanjakana ny mamelona azy fa raha olo-tsotra tsy maintsy ny tombotsoany aloha no tadiaviny ka vao maika mety hanome fahasahiranana ny maro ny hitantanan’ny olo-tsotra azy.
Nisy ihany moa ny nanohitra hoe rehefa tantanin’ny olo-tsotra izy no mety handroso kokoa ary jereo amin’ny banky mameno ny tanàna izany. Izaho moa tsy mba tafiditra mihitsy fa saiky hiteny aho hoe : ny an’ny banky jereo fa tereny ankolaka ny olona hampiasa karatry ny banky nefa sady efa andoavam-bola betsaka iny no mbola milahatra ihany ianao na dia efa manana karatra aza. Tsy fanatro hoe mifanaraka haka vola daholo ve ireto olona ireto sa ahoana fa na gasy na vazaha dia milahatra aby.
Mamarana azy eto dia tsinjotsinjo indray fa ny menaka indray no ho raharaha mafana atsy ho atsy. Tsy dia misy loatra manko izy amin’izao fotoana izao eny amin’ny mpivarotra ary efa mahatratra Ar 3.000 na Ar3.500 izy izao eny amin’ny mpivarotra eto Antananarivo eny amin’izay ahitana. Efa tokana ihany koa moa sisa ny manapariaka ity menaka ity eto Madagasikara ka izay no mety mahatonga ny olana.
Akon'ny 1 mey
2007-05-01 @ 16:14 in Ankapobeny
Raha ny tokony ho izy dia tsy iasana nefa andraisan-karama ity andro voalohany volana mey ity. Izay no fihevitra voalohany saingy azo atao hoe fanomezana malalaka ny mpiasa hanao ny fitakiany koa ity andro ity. Lasa ihany anefa ny saina mahita ny zava-miseho amin’izao fotoana izao indrindra fa ny eto Madagasikara.
Miala sasatra any an-trano amin’ny fikarakarana na mitsangatsangana no tena ataon’ny maro amin’ny mpiasa eto Antananarivo fa tsy hihevitra ny momba ny fari-piainany velively. Efa leo nosoavalian’ny mpanao politika ( fa tsy nosoavalian’ny mpamosavy !) amin’ny fitakiana tokoa angaha ka aleo mionona amin’izao. Ny eto Madagasikara rahateo moa tsy maintsy maka alalana amin’ny Prefet (inona tokoa re izao no teny malagasy mahalaza azy ity ? Mpiadidy ?) raha hilahatra an-dalam-be na dia amin’ity andro natokana ho amin’ny fitakiana ity aza. Tsy afaka nanao ny azy manokana noho izany ny Sekrima saiky hanao ny azy teny Behoririka. Ny an’ny Sendika hafa moa dia voalaza fa niainga tao amin’ny tranombokim-pirenena Ampefiloha dia nizotra ho eny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Io ihany no filaharana nahazo alalana fa ny ankoatra izay teto Antananarivo dia tsy azo nekena. Fa vitsy dia vitsy ny olona nanatrika izany fotoana izany. Midika ve izany fa tsy manana zavatra hotakiana ny mpiasa malagasy ? Fijeriko fotsiny no manao hoe toy ny manaiky ny toe-java-misy amin’izao izy satria hisy hijapy hatrany izay rehetra mety ho tsara raha fantany fa hahazoany seza iny fitakiana iny. Indrisy ry politika, potikao ny hetahetan’ny mpiasa.
Fa nifanindry tamin’ny fetin’ny mpiasa koa ny fanomboan’ny fotoam-piasan’ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Talata voalohany amin’ny volana mey manko ny fotoam-piasana voalohany isan-taona. Mitontona anio indrindra izany amin’ity taona ity 2007 ity. Tsy nahita izay tany amin’ny antenimieram-pirenena aho aloha fa ny tao amin’ny antenimieran-doholona no nisy tsipalotro. Tsy toy ny mahazatra manko fa nisy nihira tao amin’ilay lanonam-panokafana ka ny filohan’ny antenimiera Rajemison Rakotomaharo no nanolotra ireo mpihira ireo. Ny hitako moa dia ny antoko mpihiran’ny antenimieran-doholona sy tarika iray avy any amin’ny faritra Boeny any. Mba niova filamatra koa ry zareo izany, hoy aho. Iza koa ary no nanana ity hevitra ity ?
Hatsikana: Mahafinaritra ny maka sary!
2007-04-26 @ 17:20 in Ankapobeny
Tena raiso amin'ny lafiny mampihomehy fotsiny ity sary ity ry zareo fa aza raisina amin'ny zavatra hafa mihitsy e! Koa dia miala tsiny mialoha raha misy ny tohina nefa tsy laitrako fa tiako aseho foana e!
«Mialoha 1 2 3 ... 34 35 36 37 38 39 40 Manaraka»